मनि मार्केट « Clickmandu
बीगमार्टमा आइएमई पे एप मार्फत पैसा तिर्दा १५%
काठमाडौं । आइएमई पे र स्मार्ट क्यूआरबीच साझेदारी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार बीगमार्ट सुपर मार्केटको सम्पुर्ण आउटलेटमा आइएमई पे एप मार्फत स्मार्ट क्यूआर स्क्यान गर्दा १५% छुट
प्रणालीमा एकै साता थपियो ३४ अर्ब निक्षेप
काठमाडौं । एक साताको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा ३४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । असार मसान्त आउन लागेसँगै कर्जा लगानी भने घट्न लागेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार असार
कानूनविपरित हब को-अपरेटिभले गर्यो अन्तरसहकारी कारोबार, कारबाही हुन्छ: विभाग
काठमाडौं । हब को-अपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडले कानून विपरित अन्तरसहकारी कारोबार गरेको भेटिएको छ । हबले कानून विपरित अन्तरसहकारी कारोबार गरेको गुनासो बढेपछि सहकारी विभागले विशेष चासो दिएर अनुसन्धान शुरु गरेको
बुक बिल्डिङ विधिका लागि प्रभु, नेपाल लाइफसहित १०९ वटा संस्था योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा स्वीकृत (नामसहित)
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले थप ३ सहित १०९ वटा संगठित संस्थालाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृति दिएको छ । बोर्डका अनुसार थपिएका ३ वटासहित योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या
मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीका कर्मचारीको तलब-भत्ता तथा सेवा-सुविधा नघट्ने
काठमाडौं । मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीका कर्मचारीको तलब-भत्ता तथा सेवा-सुविधा नघट्ने भएको छ । समितिले गाभ्ने/गाभिने बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई गाभिएर कायम हुने बीमा कम्पनीहरूमा निजहरूको साविकमा रहेको पद अनुसारको तह
सम्हालिन खोज्दै सेयर बजार, कारोबार रकमले दियो साथ
काठमाडौं । कारोबारको अन्तिम समयमा सेयर बजार सम्हालिन नसक्दा सामान्य गिरावट देखिएइको छ । कारोबारको सुरुदेखि सामान्य उतार चढाब रहेको बजारमा अन्तिम समयमा सम्हालिन नसक्दा बजारमा गिरावट देखिएको छ ।
सेयर बजारमा लगानीकर्ताको रुवाबासी, सरकार आनन्दले बसेको छः केपी ओली
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले सेयर बजारमा लगानीकर्ताको रुवाबासी छाएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विषेश समयमा बोल्ने क्रममा ओलीले
प्रि-ओपनिङमा ९.२० अंकले बढ्यो बजार
काठमाडौं । प्रि–ओपनिङमा सेयर बजार ९.२० अंकले बढेको छ । बजार ९.२० अंकले बढेर परिसूचक २०९५.६२ बिन्दुमा रोकिएको छ । ३४ कम्पनीको २ हजार ८१५ कित्ता सेयर १४ लाख ४
अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीको आइपीओ आजदेखि
काठमाडौं । अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निष्कासन गरेको छ । १ सय रुपैयाँ अंकितका दरले १९ लाख ५७ हजार ५०० कित्तामध्ये २ प्रतिशत अर्थात् ३९
स्वास्थ्य बीमाः रकम नपाएपछि कार्यक्रम स्थगित गर्दै अस्पताल, भुक्तानीमा किन देखियो समस्या ?
काठमाडौं । लामो समयदेखि बीमितको उपचार गरेवापतको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सूचीकृत भएका अस्पतालहरूले धमाधम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय लिन थालेका छन् ।
स्वाप रेसियोमा ६५ र ८५ को अडानले हिमालयन र सिभिल बैंकको मर्जर भाँडिने खतरा, अर्को जोडीको खोजी
एक वर्षको नाफा बिर्सन गभर्नर अधिकारीको आग्रह, बैंकको प्रोभिजन २० अर्बले बढ्ने
यी हुन् एक वर्षमै १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने १६ नेपाली कम्पनी
डलर अभावमा पनि अर्बपतिको ‘डेस्टिनेसन वेडिङ’ दुबई, बाली र टर्कीमा, राजस्व अनुसन्धानको सुक्ष्म निगरानी
विदेशी लगानीकर्ताले किन धमाधम छाड्दैछन् चीन ? ३०० अर्ब डलर बराबरको लगानी बाहिरियो
एक महिनाभित्र संघ संस्थामा रहेको ऋण, रोक्का जग्गाको विवरण पठाउन सहकारी विभागको निर्देशन